Bat-eared Fox - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
I-Bat-eared Fox [i-Otocyon megalotis]
I-Bat-Eared Fox inengubo ye-silver-gray (engwevu), umsila-omnyama otsolo zinombala omnyama phezulu. Uphawu olubalaseleyo ziindlebe ezinkulu, ezimnyama ngaphandle namhlophe ngaphakathi. Umtsalane omde, ubukhali bubumnyama phezulu kunye nomhlophe ngaphantsi. Ezi zidalwa ezincinci ziphezulu nge-300 mm emagxeni kwaye zibe nobude be 800 mm. Ubukhulu bu malunga no-3kg.
Zinamazinyo amancinci avimbela ukutya kwabo kwiizinambuzane ezincinci kunye neziqhamo. Umthombo wokutya oyintloko uphumelela ixesha lokuvuna. Baxhamla kumaqela entsapho.
Amantshontsho amabini ukuya kwezinhlanu zizalwe emva kwexesha lokunyuka kweentsuku ezingama-
Amashumi amathandathu. Amantshontsho azalwe ngo-Okthobha ukuya ekuqaleni kukaJanuwari. Abancinane banconywa malunga neveki ezilishumi. Ukukhula ngokwesondo kunye nomsebenzi wokuzala kuza kuqala ngonyaka wesibini wobomi.
I-Bat-Eared Fox ziphuma ngobusuku, zilale emini kwimivumba. Amadoda azo alinda umkhombe apho abancinci bafihliweyo, ngelixa iifumba zezilwanyana. Indawo yokuhlala ekhethiweyo inqabile engceni okanye ilizwe elivulekileyo elihlawulela ukubonakala kakuhle ekufumaneni izilwanyana kunye nokutya okulungiselelwe. Xa ubalekela kwizilwanyana zezilwanyana zaseBat-Eared Foxes mhlawumbi ilala ngomqolo okanye, ukuba kunokwenzeka, iphumelele kwinqumlezo yengca ende okanye isiqithini.
Zixhaphake kwintshona neMpuma Afrika. Zivela kwindawo ezomileyo kunye neendawo ezomileyo. Ngokuphinda kwasasazeka kwiCape Peninsula nakwiCape Agulhas. Ngaphandle kokushushiswa ngamafama ngamafama, kusekhona.
Enye yeempawu ezithandekayo zeBat-eared Fox yindlela ezihamba ngayo ngeendlebe zayo kufuphi nomhlaba xa zifumana ukutya. ziya kuphazamiseka ngokukhawuleza, ziphulaphule ngenyameko zize zihambe okanye zifune ngokukhawuleza. Iindlebe zazo ziyakwazi ukuthabatha ukunyuka kweenambuzane phantsi komhlaba.